Simba Chiteshi Mavharuvhu Fekitori, Vatengesi - China Simba Chiteshi Mavharuvhu Vagadziri
Magadzirirwo Rudzi: yenyukireya simba vharuvhu kutyora vharafu Model: ZKPHF41F-150 150Lb, ZKPHF21F-300 300Lb Chezita dhayamita: DN 20-50 Chigadzirwa chinoshandiswa cheAP1000 unit semidziyo isina kusimba kumanikidza suction kudzivirira yakanyanya yakaderera kumanikidza kubva kukuvadza iyo michina. 1.With chitubu mhando vharuvhu decompression, iyo yekuputsa kutyora vharafu inoratidzira zviri nyore kugara uchimanikidza uye kugadzirisa uye kuri nyore kumisikidza. Iyo vharuvhu yakagadzirirwa seyese padanho rekumanikidza uye dhizaini dhizaini ...
M60A yekuputsa kutyora vharafu
Magadzirirwo Rudzi: yenyukireya simba vharuvhu kutyora vharafu Model: JNDX100-150P 150Lb Chezita dhayamita: DN 100-250 Inoshandiswa kune condenser sisitimu yenyukireya chiteshi, ine yakashata kumanikidza kuyamwa, yakanaka kumanikidza kupera uye emvura leakage kudzivirira mabasa. kutyora vharafu, otomatiki vharafu, inoda hapana yekuwedzera dhiraivha kana yaiswa mukushanda. Panguva yakajairika yekushanda nyika, rakabatana simba rechitubu nepakati rinoshanda pane vharafu disc rinodzvanya iyo vharafu d ...
Kupisa uye kumanikidza kudzikisa vharuvhu yepasi kumanikidza kudarika
Rondedzero Rudzi Kudzvinyirira Kuderedza Valve Model Y966Y-P5545V, Y966Y-P54.550V, Y966Y-P54.535V, Y966Y-P54.530V Chezita dhayamita DN 200-450 Nemamiriro ekushanda kweakanyanya tembiricha uye hombe kumanikidza uye tembiricha misiyano, inotora yakawanda -steve sleeve yekumanikidza kudzikisira uye yekudzosera kumashure kuvhura chitubu kamwene yemvura yekupfapfaidza uye tembiricha kudzikisira kuvimbisa tembiricha uye kumanikidza kudzikisira mhedzisiro. Advantages Valve ndeye angular mamiriro ...
Kupisa uye kumanikidza kudzikisira vharuvhu yekumanikidza yakasimba kuramba
Rondedzero Rudzi Kudzvinyirira Kuderedza Valve Model Y966Y-P54.5140V, Y966Y-P55190V Chezita Dhayamita DN 125-275 Iine mamiriro ekushanda ekupisa kwakanyanya uye kumanikidza kukuru uye tembiricha mutsauko. Iyo inotora yakawanda-nhanho sleeve yekumanikidza kudzikisira uye anobatsira emhepo atomization mvura pfapfaidzo yekudzikisa tembiricha kuvimbisa mhedzisiro yetembiricha uye kumanikidza kudzikisira. Zvakanakira Valve ndeye angular chimiro uye yepakati kuyerera nzira ndiko kuyerera ...
Kumanikidza kudzikisira vharuvhu yetsiu ichivhuvhuta ichideredza chiteshi chemhepo pre-hita
Rondedzero Rudzi Kudzvinyirira Kuderedza Valve Model Y666Y-P55 80 Y, Y666Y-1500LB Chezita Dhayamita DN 100 Iyo soot ichivhuvhuta ichideredza vharuvhu ye600 kusvika 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) mweya pre-hita inotora yakanyanya tembiricha yekudziya futi semhepo inovhuvhuta mweya sosi. Kumanikidza kunoderedzwa nevhavha yekudzora yeiyo sosi inoridza ichidzikisa chiteshi uye inopihwa kune sosi blower seyosi inovhuvhuta mweya sosi. Zvakanakira The vharafu muviri adopts ndokugadzira ndokugadzira nomoto stru ...
Kumanikidza kudzikisira vharuvhu yetsiu ichivhuvhuta ichideredza chiteshi
Rondedzero Rudzi Kudzvinyirira Kuderedza Valve Model Y669Y-P58280V, Y669Y-3000SPL Inodudza Dhayamita DN 80 Iyo inoshandiswa kune sosi yekuvhuvhuta system ye600 kusvika 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) thermal power unit unit boiler. Zvakanakira Muviri wevharuvhu unotora angular yakagadzira simbi simbi ine simba rakakura uye yepakati kuyerera nzira ndiyo inoyerera yekuvhura mhando kusangana nezvesimba zvinodiwa pasi yakanyanya tembiricha uye kumanikidza. Iine garo rekuwisira nepombi. The vharafu S ...
Mvura pfapfaidzo inodzora vharuvhu yekukwirira kumanikidza
Rondedzero Rudzi rwekugadzirisa Valve Model T761Y-2500LB, T761Y-420 Inodudza Dhayamita DN 100-150 Iyo inodzora tembiricha ichideredza kuyerera kwemvura kwetembiricha uye kumanikidza kudzikisira vharuvhu yekumanikidza kwakapfuura neiyo turbine yemhepo. Nemamiriro ekushanda ekumanikidza kwakanyanya uye musiyano mukuru wekumanikidza, inotora yakawanda-nhanho yekumhanyisa modhi kudzivirira kuitika kwecavitation uye kupenya kwemvura. Zvakanakira Valve ndeye angular chimiro uye yepakati kuyerera nzira ndeye ...
Kudzora vharuvhu yemvura huru yekupfuura
Rondedzero Rudzi rwekugadzirisa Valve Model T668Y-4500LB, T668Y-500, T668Y-630 Zita Rezita Dhayamita DN 300-400 Iyo inoshandiswa kumvura huru yekupfuura pombi ye1000MW supercritical (ultra-supercritical) unit boiler yekumisikidza kuerera kwemvura kuyerera. Zvakanakira Iyo vharuvhu yakatwasuka mhando dhizaini, yepakati kuyerera nzira ndiko kuyerera mhando uye nekuisa chisimbiso pamusoro pevhavha chigaro chiri kure nenhanho yekupedzisira flash evaporation zone kuvimbisa hupenyu hwebasa. Muviri wevhavha ...
Emergency dhureni yekudzora vharuvhu yekumanikidza yakanyanya hita
Rondedzero Rudzi rweGedhi Valve Model Z964Y Kumanikidza PN20-50MPa 1500LB-2500LB Chezita Dhayamita DN 300-500 Inoshandiswa sekuvhura nekuvhara michina yekupompa sisitimu kana mamwe epamusoro uye epakati epombi pombi masisitimu e600 kusvika 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) unit turbine yemhepo. Zvakanakira Iyo vharuvhu muviri uye bhoneti inotora yepakati flange yakanamirwa yekubatanidza chimiro, iine nyore disassembly. Ose maviri magumo teerera welded kubatana. The vharafu Disc ...
Rondedzero Rudzi rweKutonga Valve Model T964Y-420Ⅰ, T964Y-500Ⅰ, T964Y-2500LB Inodudza Dhayamita DN 250-300 Iyo inoshandiswa pamwero wemvura kudzora kwetangi remvura ye600 kusvika 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) unit uye kuzadzisa chinangwa chekugadzirisa. huwandu hwemvura yetangi remvura kuburikidza nekuvhurika kwakasiyana. Zvakanakira Muviri wevharuvhu unotora chimiro chese chakazara neiyo yakasimba simba uye vharafu inotora plunger mhando chimiro pamwe nekuyerera kuyerera ...
Dhonza vharafu yemhepo-yemvura system
Rondedzero Rudzi rweDrain Valve Model PJ661Y-500 (I) V, PJ661Y-630 V, PJ661Y-P54290 (I) V, PJ661Y-P61310 V Inonzi Dhayamita DN 40-100 Chigadzirwa chinoshandiswa kune hwemvura-yemvura system yeabhaira kana emhepo turbine. yesimba remagetsi rinopisa (ultra-supercritical) unit. Zvakanakira Muviri wevharuvhu unotora chimiro chakazara. Simbiso mhando vharuvhu muviri uye bhoneti adopts kumanikidzwa kuzvidzora chisimbiso mamiriro. Kuisa chisimbiso pamusoro pechigaro chevhavha ine Stellite 6 alloy ...
Hydraulic matatu-nzira vharuvhu yemvura yekupa yakakwira-kumanikidza hita
Rondedzero Rudzi rweTatu-nzira Valve Model F763Y-2500LB, F763Y-320, F763Y-420 Inodudza Dhayamita DN 350-650 Munguva yakajairika mashandiro emhepo-yekumanikidza hita ye600 kusvika 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) thermal power unit, iyo nzira huru yetatu-nzira vharuvhu yakakwira yekumanikidza hita inlet inovhurwa uye yekupfuura yakavharwa. Mvura yekuboiler inopinda mune yakanyanya-kumanikidza hita kubva munzira huru usati wapinda bhaira kuburikidza neayo matatu-nzira vharafu pakakwirira pre ...